Singobani Thina – ISiseko iJakes Gerwel
Home » Singobani Thina
UPhoebé Gerwel, ongumhlolokazi kaNjingalwazi Jakes Gerwel, ulilungu eliyile isiSeko i- Jakes Gerwel. Wafumana isidanga sakhe sobuNontlalo-ntle kwiYunivesithi yaseNtshona Koloni. Ngenxa yendima yolawulo eyathi yadlalwa nguNjingalwazi uGerwel ukusungula i-Suidooster Festival, u Phoebé uye wanikwa iwonga lokuthi aphathe iSuidooster Fees.
Phoebé uthe wanikela kwiSiseko iJakes Gerwel ngePaulet House, indawo ethandekayo yokuphumla eseSomerset East yomyeni wakhe uNingalwazi Jakes Gerwel.
Phoebé unendima ebonakalayo kwiSuidooster Festival, iJakes Gerwel Family Trust kwakunye neSiseko iJakes Gerwel.
AMALUNGU EBHODI ANEGUNYA LOKULAWULA
Brian Figaji (USihlalo)
UBrian Figaji wafumana i-digri yakhe iB.Sc. kwakunye nediploma ye postgraduate tertiary education kwiYunivesithi yaseNtshona Koloni. Ngaphandle kwezinye iidigri anazo, ukuquka i-masters awazifumana kwiYunivesithi iHarvard, uBrian kanjalo wafumana ukuwongwa ngobuGqirha amatyeli amaninzi. Usebenze njenge consulting civil engineer kwakhona wasebenza njengoMphathi kwakunye nesekela mphathi le Peninsula Technikon.
UBrian uyingxe-nye yeZiko lezeNjineli zoMzantsi Afrika, iSouth African Society for Professional Engineers kwakunye nezeMfundo-ephakamileyo yeeNjineli eMzantsi Afrika. Ukwalilo nelungu lesikolo semfundo ephakamileyo sezeNzululwazi soMzantsi Afrika.
Brian uqhubeke wasebenza KwiBhunga leMfundo ePhakamileyo iCHE ngamafutshane, wayengumlawuli weQela le Nedbank, usihlalo weIrvin & Johnson wayengesosigqeba, kwaye wayelilungu lebhodi leDevelopment Bank of Southern Africa.
Brian usasebenza ekuhlaleni kwilizwe lakhe nakumazwe-jikelele, ngokuthi enze, umzekelo, ungumlawuli weYouth Development Trust South Africa, umongameli weBoy Scouts eNtshona Koloni yaye ungummeli womzantsi Afrika kwiSigqeba seBhodi yeUNESCO.
UAnnari van der Merwe waqala umsebenzi wakhe wopapasho njengentloko yesebe loncwadi lwabanwana kwakunye nolutsha eTafelberg Publishers ngonyaka ka 1978 yaye wathi wehla njengomlawuli weRandom House South Africa ngo 2008. Waza waqala into entsha ngokuthi ayile iKwela Books for Naspers nangokuthi ashiye umzila ngokuseka Umuzi for Random House.
Izifundo zakhe zoncwadi kwiYunivesithi iPort Elizabeth kwakunye neYunivesithi iRhodes zithe zamkhokelela u Annari ukuba aqhubeke nezifundo zakhe eUtrecht Rijksuniversiteit eNetherlands. Ngelixesha u Annari wayengumhlohli wemfundo ephakamileyo kwiSebe le Afrikaans and Dutch kwiYunivesithi yaseRhodes, uye wagqiba izifundo zakhe zobuGqirha kwimibongo yeBreyten Breytenbach’s phantsi koqeqesho luka André Brink. Kwakhona uthe wangumhlohli wemfundo ephakamileyo ukusukela ngonyaka ka 1978 ukuyakutsho phakathi kunyaka ka 1980 kwiSebe le Afrikaans kwiYunivesithi yaseNtshona Koloni.
Annari ngoku ungumzobi ngokupheleleyo.
UGoolam Aboobaker unesidanga seB.Sc. ihonours asifumene kwiYunivesithi yakwaZulu-Natala kwakunye nesidanga se M.Sc. kwezoQoqosho kwiYunivesithi yaseLondon. Usebenze njengengcali ye Fisiksi kwezonyango phambi kokuba abengumncedisi okhethekileyo kuJakes Gerwel kwiYunivesithi yaseNtshona Koloni ngonyaka ka1988.
Ngo 1995 uGoolam waqeshwa njengoMlawuli weKhabhinethi yoPhando kwiOfisi yongasekhoyo uMongameli uNelson Mandela kwakhona ngonyaka ka 1997 wanguMlawuli oyiNtloko woPhuhliso lwezoQoqosho kwicandelo lenkqubo yeOfisi ka sekela-mongameli. Emva kokusebenza kwakhe njengomcebisi ophezulu kwi-International Monetary Fund (IMF), uGoolam wamiselwa njengoSekela-Mlawuli-Jikelele kwiSebe lezeziMali.
UGoolam wayelilungu elaseka iKhomishini Yamalungelo Abantu (HRC) eDurban kwakhona, wayebandakanyeka ekuqaleni kwe United Democratic Front (UDF). Indima ka Goolam ekukhuleni kwenkonzo iKagiso Trust inabela emva kunyaka ka 1987.
UHeinrich Gerwel usebenza kwiCandelo lezoLimo kwakunye noQoqosho kwiYunivesithi i-Stellenbosch njengoko ekwanguye noMhlohli wamaxesha athile kwiSikolo sezoQoqosho kwiYunivesithi yaseKapa. Umdla wophando ka Heinrich ubandakanya uphuhliso lwezoqoqosho, ingcamango yezentlalo kwakunye nenkqubo nohlalutyo lwemveliso.
UHeinrich uthweswe izidanga zakhe zombini kwezoqoqosho i-honours kwakunye ne-masters kwiYunivesithi yase Ntshona Koloni. Wagqiba i-digri yakhe iB.Sc. ngemeyja ezimbini ngokungaqhelekanga kwiKhemestri kwakunye nezoqoqosho kwiyunivesithi yaseRhodes.
Eqeqeshwe kwiInstitute of Culinary Arts eStellenbosch, uHeinrich ukwangumpheki ogqibeleleyo.
Mustaq Brey yi CEO yeBrimstone Investment Corporation, inkampani awayiqulunkqa nabanye ngonyaka ka1995. Ngokokusebenza uyi-chartered accounted, Mustaq usebenza njengosihlalo weOceana Group, Life Healthcare kunye neInterfront. Kananjalo ukwasebenza kwibhodi ze-Equites Property Fund, Aon Re South Africa, Lion of Africa Insurance Company kunye neHouse of Monatic.
UMustaq uqhubeka nokusebenza njengosihlalo webhodi zekomiti ezohlukeneyo zeMandela Rhodes Foundation yaye ukwangumlawuli ozimeleyo weWestern Province Cricket Association aphinde abengusihlalo kwikomiti yayo yezezimali.
Ungumyili weSaabri & Ashrafi Relief Fund, umnqweno kaMustaq wokuphucula uluntu udibanisa ishishini lakhe kwakunye nobomi bakhe.
UMfundo Nkuhlu une digri ebizwa ngokuba yiBachelor of Arts honours awayifumana kwiYunivesithi yaseNtshona Koloni yaye uthe wagqiba ngokwezinga eliphezulu i-INSEAD Strategic Management in Banking programme kwakunye neNkqubo yoLawulo oluPhambili yaseHavard.
UMfundo usebenze njengomphathi olawulayo eNedbank Africa, phambi kokuba abe Ligosa eliPhethe i-Ofisi noMlawuli Jikelele eNedbank Group Limited kwakunye naseNedbank Corporate Bank ngo 2015.
Ngaphambi kokubandakanyeka kwakhe eNedbank, uMfundo wayengumphathi wezicwangciso eSouth African Revenue Services (SARS) yaye wanoxanduva leNew Partnership for Africa’s Development (NEPAD) ngoko wayesebenza kwiSebe lwezoRhwebi kunye naMashishini.
UMfundo ngumbhali wamanqaku amanintsi kwezoqoqosho kwakunye nokuhlanganiswa koqoqosho eMzantsi Afrika.
UWilmot James okwangoku unguNjingalwazi ongumtyeleli wePediatrics ezingekho phantsi kwezonyango, ukwangoweMicimbi Yamazwe-ngamazwe kwiYunivesithi iColumbia. Wilmot ufumene iwonga lakhe lobuGqirha, i-Ph.D. ngamafutshane, kwi Yunivesithi iWisconsin-Madison yaye ngaphambili wayese-ofisini njengelungu le Palamente ekwanguye nomphathiswa wezeMpilo weqela eliphikisayo i- DA. Kwakhona ukhe wasebenza njengosihlalo we DA pahakathi konyaka ka2010 no 2016.
Umbhali obalaseleyo kwakunye nomhleli ohloniphekileyo, igama lakhe uWilmot livela kwiincwadi ezingapha kweshumi elinesihlanu, oku kuquka izincoko eziqunjanisiweyo ezingokuqonda inzululwazi yoluntu yaye uthe wasebenzisana nabahleli bentetho zobumongameli zika Nelson Mandela eziqokelelweyo.
UWilmot uthe wangumhlohli wemfundo ephakamileyo kuzo zombini iYunivesithi yeNtshona Koloni kwakunye neYunivesithi yaseKapa. Amava akhe ezifundo zophando emveni kokugqiba ezobuGqirha kwakunye nokubanguNjingalwazi ongumtyeleli uwafumene kwiYunivesithi iYale, iYunivesithi iIndiana kwakunye neYunivesithi i Edinburgh.
UTheo Kemp wagqiba i-Matsers zakhe ekubhaleni ngobuchule ngokufundiswa nguMarlene van Niekerk kwakunye noWillem Anker phantsi kweSebe iAfrikaans and Dutch kwiYunivesithu iStellenbosch.
Incwadi ka Theo yokuqala okanye awathi wazibonakalisa ngayo ngu-Skool, ethetha ngokuhlola ukuhla kwezinga kwizikolo zelizwe eMzantsi Afrika, yathi yaqala ukupapashwa ngonyaka ka-2011. Skool yathi yonyulelwa amabhaso amathathu oncwadi, ibhaso iJan Rabie Rapport, ibhaso iUniversity of Johannesburg Creative Writing (inqanaba lokuqala) kwakunye nebhaso iSouth African Literary Awards (SALA).
Emva komsebenzi wakhe wokufundisa ixeshana, Theo wasebenza njengomphathi weprojekthi iSU Woordfees yaye nanjengomphathi wezopapasho eNB Publishers emva koko apho wathi wayila iziko lezencubeko iBreytenbach eWellington.
Theo wathi waqhubeka wabandakanyeka kwiKKNK Festival njengomphathi wenkqubo kwakunye nase Aardklop njengomqulunqi wenkqubo zeencwadi. Wathunywa yiYunivesithi yase Free State ukuba ayile umnyadala woncwadi yeVrystaat Arts Festival ngo 2016.
Theo wamiselwa njengomlawuli oyintloko wokuqala wokulawula iSiseko iJakes Gerwel kweyeThupha ku 2017.
UMLAWULI WE PROJEKTHI
UThérèse Hulme unesidanga (asifumene e-UNISA) sobuGqirha kwezobufundisi, iNgcali ekuncedeni abantu ukuba baqonde izakhono zabo,babezingcali zobomi babo. Usebenze njengaleNgcali echazwa ngasentla kwiminyaka elishumi elinesibhozo (18) edlulileyo.
NjengeMbongi, uThérèse waqala ukuvela kwiNuwe stemme 3 ngo2005. Ngonyaka ka2009 uye wazipapashela u piemp – incwadi yemibongo kwakunye nedrama engabantu abatsha baseScottsville eKraaifontein. Ukwanguye nombhali ongumpapashi wencwadi yabantwana.
Ngo2013, uThérèse kunye noLinda van Duuren bayila i-The Cape Town Narrative Co-op (www.capetownnarrativeco-op.org/) ngokuthatha uxanduva lokunceda abantu baqonde izakhono zabo kuziswe kwinyaniso yemihla ngemihla yobume bezikolo kunye nombutho ongenangeniso (NPO), ngokusebenzisa iindibano zocweyo kunye noqeqesho.
Ngoku uqhuba i- Yoh! iprojekhthi yokubhala ngobuchule yeSiseko iJakes Gerwel kunye nabasebenzi bedibene nabafundi baseGrassy Park High School.